सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख १५ - हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँ-दुबई-काठमाडौँ प्रत्यक्ष उडान थालेको छ। आजदेखि प्रत्यक्ष रुपमा उडान थालिएको कम्पनीले जनाएको छ। दोहा, क्वालालम्पुरर याङगुनको नियमित उडान पछि हिमालयले दुबई उडान थालेको हो। दैनिक सेवाको सुरुवातसँगै हिमालय एअरलाईन्सले तीन वटा एअरबसमध्ये एउटा यस मार्गमा सच्चालन हुनेछ। जसमा ८ वटा विजनेस क्लास र १ सय ५० वटा इकोनोमी क्लासका सिट छन्।
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, वैशाख १५ - नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई देशव्यापी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आजबाट राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको बैंकिङ एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले देशभर वित्तीय साक्षरताको खाँचो रहेको औंल्याए। ‘अझै पनि कतिपय क्षेत्रमा सर्वसाधारणले घरमै पैसा राख्ने र आवश्यक परेका बेला त्यहीबाट काम चलाउने गरेको पाइन्छ, त्यहाँ वित्तीय साक्षरताको जरुरत छ’ उनले भने। मिडिया इन्टरनेसनलको आयोजना तथा राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धनमा आजदेखि बैंकिङ एक्स्पो सुरु भएको हो।
राष्ट्रिय चिया दिवस: यस्तो छ नेपाली चियाको उत्पादन
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख १५ - ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नका लागि, चिया उद्योगको रक्षा र विकास गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आज २० औं राष्टिय चिया दिवस मनाइदैँछ । करिब १ सय ५० वर्षअघिबाट सुरु भएको चिया खेती हाल २८ हजार क्षेत्रफलमा विस्तार भएको राष्टिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जानकारी दिएको छ। तथ्यांक अनुसार आ.व.२०७२/७३ मा १ करोड ८४ लाख केजी सिटिसि तथा ५८ लाख के.जि अर्थोडक्स गरी २ करोड ४२ लाख केजी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो भने २ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बराबारको १३,२८९ मे.ट चिया निर्यात भएको थियो ।
रवीन्द्र शाही , काठमाडौं, वैशाख १४ - पछिल्लो समय क्षमता बढाउँदै गएका नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरुले कच्चा पदार्थको अभाव खेप्न थालेका छन्। तीन हप्तादेखि कोइला, क्लिंकर लगायत सिमेन्टका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भारतबाट आउन नसक्दा उत्पादन घट्दै गइरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख १४ - संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कर फर्स्यौट आयोगले गरेको कर फरफारक संकास्पद देखिएको भन्दै पूर्ण विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले उक्त आयोगसँग कसलाई किन, कसरी र कति कर मिनाहा गरिएको हो र हाल करदाताको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? भनेर विवरण माग गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। कर फर्स्यौट ऐन २०३३ अनुसार चार्टड एकाउन्टेन्ट लुमध्वज महतको अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन अघिल्लो वर्ष नै सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, वैशाख १४ - स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकाय र सरकारी अस्पतालहरुले खानेपानीको बक्यौता रकम नतिरेको पाइएको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले बक्यौता रकम उठाउन नसकेपछि मन्त्री शाही आफै खानेपानीको बक्यौता उठाउने भन्दै कसिएका छन्। २०७३ मंसिर मसान्तसम्म काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम १ करोड ४३ लाख पुगेको छ ।
सुधिर भण्डारी , काठमाडौं वैशाख १४ - नेपाल यातायातले यो महिना भित्रै आफ्ना पुराना साना बसलाई विस्थापित गर्दै १० वटा ठूला बस भित्र्याउने भएको छ। अहिलेको गाडी पुरानो र सानो भएकोले आफूहरुले नयाँ बस थप्न लागेको नेपाल यातायातले जनाएको छ। यात्रुको अत्याधिक चापको समस्या तथा आफ्नो लोकप्रियतालाई घट्न नदिन करिव ३५ लाख पर्ने ३५ सिटे नयाँ बसहरु संचालनमा ल्याउन लागेको नेपाल यातायात मिनिबस सेवा समितिका सचिव गोपाल चन्द्र गुरुङले जानकारी दिए।